I-Sri Lanka Tour evela eBhubaneswar | Shayela ku: + 91-993.702.7574
Amaphakheji Wokuvakasha eSri Lanka
I-Sri Lanka, eyayaziwa ngokuthi iCeylon, iyisiqhingi esincane eningizimu ye-India, e-Indian Ocean, kodwa yilokho okuncane kuphela ezweni elihle. NgeSri Lanka Tour evela ku-package ye-Bhubaneswar, uzothola ukubona izigcawu eziphefumulayo eSri Lanka. Izigcawu zalo ezihlukahlukene zivela emanzini asezindaweni zemvula nasemasimini asomile emazweni amahle nasemigodini enesihlabathi. Izwe linempucuko yasendulo, amabhishi ase-golden sandy ngezintambo zezandla zomkhukhu, izintaba, i-raber kanye ne-tea. Ngezihlahla zeSandle 'eSri Lanka Tour kusuka eBhubaneswar, ungathola konke okuhlangenwe nakho kwengqondo okuhlola i-Sri Lanka. Ngesikhathi uvakashela lesi siqhingi, uzobona ukwakheka kwamakoloni kusukela ezinsukwini lapho amaPutukezi, amaDutch nesiNgisi abusa. Uzobona izindlovu eziningi, ezinye zazo zihlanganyele emikhosini yasendaweni, kanye nezintshe endaweni engcwele yezilwane zasendle. I-Sri Lanka lizwe elicebile kakhulu ngokwemlando, isiko, namasiko. Kuzo izivakashi ezithanda ukufakaza umlando wendawo, iSri Lanka inikeza unxantathu wamasiko kubo. I-Sri Lanka Tour evela eBhubaneswar izokushiya amahloni ngazo zonke izinto ezinhle imvelo okufanele inikele. I-Sri Lanka nayo yaziwa ngamabhishi angaphandle futhi ilanga legolide likhanya nxazonke zonyaka. I-Sri Lanka ibona ezinye zePhakethe Zikazwelonke ezinkulu ezifana ne-Yala National Park, iWilpattu National Park, iMineriya National Park, i-Udawalawe National Park kanye neHorton Planes. I-Sri Lanka Tour evela eBhubaneswar izokuvumela ukuba uhlole izulu elincane e-Indian Ocean.
It has something to offer to every kind of tourist- Nature lover, kids, adventurous noma yimuphi omunye uhlobo. Ukukhula kwezokuvakasha eSri Lanka akunawo uphawu lokuyeka ngokushesha noma kamuva. Bhala amaphakheji akho eSri Lanka Vacation manje.
IKATUNAYAKE - KANDY - NUWARA ELIYA - IBENTA - IKHAYA
Ikhodi Yokuvakasha: 1001
DAY 01: KATUNAYAKE - KANDY - 115 amahora angu-2.5
Fika e-Bandaranaike International Airport, iKayunayake eyamukelwa yi-"Spiceland Colombo" futhi ubheke ehhotela eKandy ngePinwala.
Indlovu yezindlovu, i-Pinnawala:
I-foster - ikhaya lezizindlovu ezihlukahlukene zokudala nobukhulu, ukugeza, ukudlala ndawonye ngisho nokulingana. Lezi zitholakale zilimele noma zishiywe ehlane. Kukhona ngisho namathole amancane azalwa ngokuthunjwa.
Ithebula lesikhathi seNtandane Yendlovu:
08.30am Ukuvula izintandane zezivakashi
I-09.15am-Ukudla ibhodlela izingane zendlovu
I-10.00am ukugeza kwasekuseni ku-'Ma Oya '
12noon Izindlovu zibuyela entandane ngemuva kokugeza
01.15pm Ukondla ibhodlela ingane izindlovu
U-02.00pm ukugeza kwasekuseni ku-'Ma Oya '
04.00pm Izindlovu zibuyela entandane ngemuva kokugeza
05.00pm Ukondla ibhodlela ingane izindlovu
I-06.00pm Ukuvala izintandane zezivakashi
I-Spice Garden eHingula (Kandyan Spice 99):
Kutholakala emgwaqweni omkhulu phakathi kweColombo kanye nenhloko yamagquma eKandy. Vakashela ingadi yesipuni eHingula eMawanella ukubona izinhlobo eziningi zezinongo zaseSri Lanka zidumile. I-Cinnamon, i-Cardamom, i-Pepper, i-Clove ne-nutmeg seyihlakulele leyo ndawo. Ngaphandle kweziqhumane ngabanye, le ndawo yadayisa inguqulo yayo ye powder yaseSri Lankan powder.
Ithempeli Lezinyosi Zamazinyo, Kandy:
Ithempeli lezinyosi ezingcwele zeBuddha Ingabe ithempeli elibaluleke kunazo zonke lamaSudan aseSri Lankan futhi lakhiwa nge-16th Century AD yiNkosi Wimaladharmasooriya, kuphela ngenjongo yokwakha izindlu zinozinyo.
Isidlo sakusihlwa nesidlo sasebusuku Sihlala ehhotela e-Kandy.
Indawo yokudla kwasekuseni ehhotela e Kandy & shiya ku-Nuwara Eliya ngePeradeniya naseRamboda.
I-Royal Botanical Garden, i-Peradeniya:
Leli yinsimu yenjabulo yenkosi yaseKandyan ye-16th Century futhi kamuva yaba yindawo yaseBotanical ngesikhathi soMbuso waseBrithani.
Amahora wokusebenza: 7.30am - 5.00pm (nsuku zonke)
Indawo yokudlela ne-café: 10.00am - 5.00pm
I-Gem Museum ("Tiesh" yi-Lakmini):
I-Tiesh eyaziwa ngokuthi i-Lakmini Pvt Ltd ibe yindawo ehlelelekayo yamatshe ayigugu kanye nobucwebe obuhle kakhulu bekhwalithi engcono kakhulu ngonyaka. Phakathi kwamatshe ayigugu aseSri Lankan ahlabayo emhlabeni jikelele yi-Blue Sapphires, i-Star Sapphires, i-Rubies, i-Star Rubies, i-White Sapphires, i-Sapphires e-Yellow, i-Eye yeCats, ne-Etc.Isici esiyingqayizivele sokusungulwa ngumgodi weGem owenziwe umthombo oyigugu amatshe agugu eSri Lanka. Okuhle kakhulu enhliziyweni yeSri Lanka edolobheni elihle-le-Kandy "Tiesh" lithatha kuzo zonke izingxenye ze-clientele. I-Tiesh yi-Lakmini ibilokhu ihamba phambili emiklamo yanamuhla yodumo kusukela ekuqaleni kwayo ku-1997.
I-Mackwoods Labookellie Tea Center:
Ikhona cishe ngamamitha angu-1500 ngenhla kwezinga elwandle enhliziyweni yeLabookellie Estate, enye yezitshalo ezinhle kakhulu zetiyi eSri Lanka, namuhla isitimela esithandwayo kuhambo lwabantu abahamba ngamazwe ngamazwe okuhlinzeka ithuba lokuthola i-Mackwoods Tea ngendlela engcono kunazo zonke ezweni elisezintabeni ezinokuthula. kanye nokunikeza umbono obala wokukhiqizwa kweTeyi yaseCeylon. I-Labookellie Tea Centre eye yaba yindawo ephawulekayo yomhlaba phakathi kwabombili kanye nabakhenkethi kuNuwara-Eliya waseKandy ngenxa yezimfuneko zabo zezitshalo eziphezulu ze-Labookellie. Lesi Sikhungo seTiye sinwetshiwe futhi sivuselelwe ukunikeza izivakashi zayo namakhasimende amaningi isevisi engcono esimweni esilula. I-Mackwoods inikeza izivakashi ngeholide eholwa mahhala ye-Labookellie tea factory, isipiliyoni semfundo ekwenzeni itiye kanye nenqubo yokukhiqiza.
I-Gliding masinyane ezansi emathafeni asezintabeni, amahlumela amancane nezigodi ze-Tea Estates, imifudlana encane eguquguqukayo emagqumeni aphakathi nendawo ibeletha amanye ama-waterfalls amahle kunazo zonke eSri Lanka, okunye okuyiwona "amaRamboda Waterfalls" eNuwara Eliya. Ihlaselwa phansi endaweni ephakeme ye-3200ft. I-Ramboda Falls iveza ukuziqhenya nenkazimulo kulesi siqhingi esihle esenza iSri Lanka ukuvakashelwa okuvakashelwayo kokubili okubalekela othandweni nomuntu oyithandayo.
Ukudla kwasekuseni nokudla kokudla ebusuku Kuhlale kuhhotela e-Nuwara Eliya.
DAY 03: NUWARA ELIYA - BENTOTA - 240 Kms - Amahora angu-5.5
Indawo yokudlela yasekuseni ehhotela e-Nuwara Eliya bese usuka eBentota
Isidlo sakusihlwa nesidlo sasebusuku sihlala ehhotela e-Bentota.
DAY 04: BENTOTA - COLOMBO - 65 Kms - Amahora we-2
Indawo yokudlela yasekuseni ehhotela, iBentota bese usuka eColombo
I-Turtle Hatchery, i-Kosgoda:
Imiklamo iye yasungulwa ukuze igcine inani lezingulube eziqothulayo futhi amaphrojekthi anjalo atholakala ogwini oluseningizimu yeSri Lanka lapho ama-turtles afika khona ogwini ukuze abeke amaqanda. I-turtle ibamba umgodi e-Beach, Ibeka amaqanda ayo futhi iwubeke ngesihlabathi lapho kufanele khona, ifakwe ukushisa kwelanga. Okuvame ukwenzeka ukuthi, amaqanda agonywe ngumdobi futhi athengiswa kubantu abawadlayo. Kodwa manje amaqanda athengwa ngamaphrojekthi okulondolozwa futhi ahlotshiswe ngendlela engokwemvelo ezindaweni ezihlanganisiwe lapho izinyoni zingenalo ithuba lokuzikhetha futhi izinsana zivunyelwe olwandle emva kwezinsuku ezimbili ebusuku baba nethuba elingcono lokusinda.
I-Colombo City Tour:
Shayela endaweni yendawo yokuhweba neyedolobha eyaziwa njenge Fort, eyakhiwe yiPutukezi ngekhulu le-16th. Vakashela izimakethe ezimatasa nezitolo zamatars kaPetta, vakashela i-Buddhist nethempeli lamaHindu, isonto elidala laseDutch futhi uqhubeke endaweni yokuhlala yaseCinnamon Gardens. Shayela ngaphesheya kweHholo laseDolobheni, i-Independence Square ne-BMICH (International Convention Centre).
Ukuthenga ku; (phezu kwesithakazelo)
indlu yemodeli yeMfashini
Umzila wePharadesi unyawo
Idolobha elikhuluLiberty Plaza
Isidlo sakusihlwa nesidlo sasebusuku Kuhlale ku-Hotel e-Colombo.
DAY 05: COLOMBO - KATUNAYAKE - 37 Kms - I-1 Ihora
Indawo yokudlela yasekuseni ehhotela e Colombo.
Ngokusho kwesikhathi sakho sokuphumula ushiye i-Bandaranaike International Airport, i-Katunayake yokuhamba. Ukuphela kokuvakasha.